Soomaali – The Official Website Of Farah Garane
Date: February 19, 2016Author: Farah Garane 0 Comments
1aad Safka sare: Daa’uud Cabdulle Xirsi • Hadraawi • Suldan Yusuf Ali Kenadid • Suldan Mohamoud Ali Shire
2aad Safka dhexe: Maxamad Cabdulle xasan • Fatima Jibrell • Iman Abdulmajid • Cusman Yusuf Kenadid
3aad Safka hoose: Nuuraddin Faarax • Asli xasan Cabaade • Sheikh Mukhtar Mohamed Hussein •Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal
Geeska Afrika, Bariga Dhexe
Somalia 8.5 malyan
Ethiopia 4.6 malyan
Norway 27 523 
Imaaraatka Carabta 25,000 
Somali iyo Carabi
Carab • Cafar • Agaw • Beja • Oromo • Rendille •Saho
Soomaali (Af-Carabi: الصوماليون) waa dad ku nool Geeska Afrika Jamhuriyadda FederaalkaSoomaaliya, Waxayna ku hadlaan Af-Soomaali Waana mid kamid ah LuqadahaKushitiga Faraceeda Afro Aasiya.
Talyaani Oo haystay KoofurtaSoomaaliya
Ingriiska Oo haystay WuqooyigaSoomaaliya (Somalilan)
Faransiiska Oo haystay XeebtaSoomaaliya (Jabuuti)
Itoobiya + Ingiriiska Oo haystay Soomaali Galbeed (Soomaali galbeed)
Waxay wada leeyihiin dhaqan iyo af ay wadaagaan. Somalida waxay ku kala nool yihiin, qurbaha iyo dhulka Soomaaliya gaar ahaan Soomaaliweyn . Soomaalida badankooda waa dad reer guuraah ah, waxaana lagu yaqaanaa, xoolo dhaqasho, sida ariga iyo geela iyo Lo’da. Soomaalida waxay ahaayeen dad ku dagaalama daaqqa xoolaha iyo Biyah ama si kale hadaan u dhigo waxan aan odhan karna baad iyo biyo. Dadka soomaaliyeed waxaa dibadda uhaajiray ku dhowaadb ilaa iyo 5 Malyan. maadaamaa dalku ku jiray in kabadan 20 sano oo dagaal ah, Dhanka diinta soomaaliya waxaa aad awood ugu leh suufinimada suufiyada soomaali xoogaa waa ka duwan yihiin suufiyada dalalka qaarkood inkastoo ay aqoonta diintuu ay sii yaraanayso . waayadii hore markii ay soomaaliya nabad ahayd iskuulaad iyo jaamacado badan ayaa ku yaalay dalka soomaaliya. dhaqaalaha dalkana kor ayuu u socday. Somalida waxay ganacsi la lahaayeen wadamada carabta iyo aasiya iyo yurub.. dagaaladi Soomaaliya siday u bilaabmeen , waxaa dhacday in ay soomaliduu isku dilaan qabiil dartiis iyo is fahmi la aan.. maanta Soomaalida dhibaato ayay ku sugan yihiin meelkasto ay joogaan.Waxaana keenay dulmiga ay ayaguu isku gaysteen somalida boqolkiiba 30 waa qaxooti oo wadamada kaley ku kala nool yihiin. waxayna u badan yihiin wadamadaItoobiya, kiinya, jabuuti, kanada, Mareykanka,Iswiidhan, Denmark, Finland, Jarmalka,Talyaaniga, Shiinaha iyo wadamo kale oo aan la tiri karin.
Soomaalida meelaha ay ku badanyihiin
Map Kaan waxa uu muujinayaa meelaha ay ku badanyihiin.
Khubarada ku xeeldheer Taariikhda dalkaSoomaaliya waxa ay sheegeen in erega Soomaaliya uu ka taaganyahay labo eray oo la’isku geeyay, kuwaasi oo kala ah (Soo–Maal), iyadoo eraga (Soo) macnihiisa loola jeedo Soco, halka ereyga (Maal) uu macnihiisu ka soo jeedo Lis. Marka labadaasi eray la’isku daro waxaa uu noqonayaa (Soo Maal Saca, rida, laxda, geela). Khubarada qaarkood waxa ay sheegaan in magaca Soomaali uu asal ahaan ka soo jeedo ereyga carabiga ee ah (Duu-maa)( ذو مال) oo macna ahaan la macna ah Shacab xoolo badan leh. Sooyaalka taariikhda qadiimiga ah waxaa iyadana laga helayaa macno kale iyadoo khubaraduna ku doodayaan in ereygaasi uu ka yimid Samaale oo micnihiisu yahay ninkii waranka Dheeraa. Samaale ayaa la sheegaa in uu ahaa ab iyo waziirkii ay ka soo farcanmeen dadka Soomaaliyeed (Aw-Samaale). Taariikh ahaan dalku waxa uu lahaan jiray xadaarad facween waxaana dalka loo aqoon jiray magacyo badan sida Dhulkii udgoonaa , Dhulkii eebe iyo Geeska Afrika.
Previous Previous post: Wax kabaro Tobanka Wadan ee ugu dadka badan aduunka
Next Next post: Jigjiga
© 2019 The Official Website Of Farah Garane